Ungabafundisa njani abantwana bakho ukuba yintoni ukomelela | IBezzia
Ungabafundisa njani abantwana bakho ukuba yintoni ukomelela
UMaria Jose Roldan | 15/05/2021 10:52 | Fundisa abantwana
Ngelishwa, Intlungu kunye nokubandezeleka yinxalenye yobomi kwaye kubalulekile ukuba wazi ukuba ujongana njani namaxesha anje. Kwimeko yabantwana, imeko inokuba nzima ngakumbi. Ukusweleka komntu osondeleyo okanye ukutshintsha nje kwendlu kunokuchaphazela kakubi impilo yeemvakalelo zomntwana.
Yiyo loo nto abazali kufuneka bafundise abantwana babo ukuba bazi ukuba yintoni ukomelela kwaye Ngale ndlela banokwazi ukoyisa amaxesha anzima abanokuba nawo ebomini babo bonke.
1 Yintoni ukomelela?
2 Izikhokelo zabazali ekufuneka zilandelwe ukufundisa abantwana babo ukomelela
Ukomelela akukho nto ingaphezulu komthamo umntu anawo, ukubanakho ukomelela xa ujongene neemeko ezithathwa njengezinzima nezintsonkothileyo. Obu buchule kufuneka bufundwe kwabancinci. Imfundo yabazali ngumba ophambili ukuze abantwana bafunde ukomelela kwiminyaka yokuqala yobomi. Emva koko siza kukuxelela indlela abazali ekufuneka basebenze ngayo ukomelela nabantwana babo.
Izikhokelo zabazali ekufuneka zilandelwe ukufundisa abantwana babo ukomelela
Kwindawo yokuqala, abantwana kufuneka bazive bezithembile ngokwaneleyo ukuze bakwazi ukujongana nemiceli mngeni ethile. Abancinci kufuneka bazi ukuba isenzo ngasinye sinesiphumo kwaye ukuze oku kwenzeke kufuneka bazenzele izigqibo. Abantwana kufuneka benze imifuniselo kwaye kuyinto eqhelekileyo ukuba ngamanye amaxesha banyanisile kwaye ngamanye amaxesha baphosakele. Into ephambili kukuba bazive bexhaswa ngamaxesha onke ngabazali kwaye ngenxa yoko bomeleza ukuzithemba kwabo.
Ukubanceda bakhe ukuzithemba kwabo kubalulekile ekufundeni ukuba yintoni ukomelela. Uziva uluncedo kwaye ukwazi, Ngokuqinisekileyo iyamnceda umntwana ukujongana neengxaki ezahlukeneyo ezinokuvela ebomini bakhe.
Enye into ekufuneka abazali basebenze nabantwana babo ngumcimbi wokukhathazeka. Abantwana kufuneka bazi ukuba kukho amaxesha apho izinto zingafezekiswa okokuqala kwaye kuyinto eqhelekileyo ukwenza iimpazamo. Kodwa ngenxa yesi sizathu, awunakukhathazeka, kuya kufuneka uzinze ukuze ufumane le nto uyifunayo.
Ekugqibeleni, kubaluleke kakhulu ukuba abantwana bazi ukuba yintoni ukomelela okusemncinci. Abazali mabafundise abantwana babo ukuba kuhlala kukho isisombululo sayo yonke into kwaye kubalulekile ukuba ufumane loo ndlela ekuvumela ukuba ube kweyona ndlela ibalaseleyo. Kuya kufuneka icace into yokuba abantwana baya kuva ubunzima ngamaxesha ahlukeneyo ebomini babo kwaye ukomelela kubalulekile ekuncedeni boyise amaxesha anzima anzima.
Kuqhelekile ukuba abazali babe nexesha elibi ngokwenene xa bebona indlela abantwana babo ababa nexesha elibi kwaye bebandezeleka, kodwa kuyinto eqhelekileyo ekufuneka yenzekile kwaye ke kufuneka yamkelwe. Enkosi kwizixhobo ezinje ukomelela, abantwana ngethemba baya kuba nakho ukujongana nezi ngxaki kwaye ukujongana neemvakalelo neemvakalelo ezinje ngentlungu okanye usizi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Fundisa abantwana » Ungabafundisa njani abantwana bakho ukuba yintoni ukomelela
I-Nail fungus: Banyange ngokukhawuleza!
Imibhalo yenyawo yekhabhoni